Pep guardiola oo ka hadlay kooxdiisa No De buryne, No Aguero No Gondugan, belo ma jirto xilli guul ay ka heleen Everton. Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Pep guardiola oo ka hadlay kooxdiisa No De buryne, No Aguero No...
Pep guardiola oo ka hadlay kooxdiisa No De buryne, No Aguero No Gondugan, belo ma jirto xilli guul ay ka heleen Everton.
Hogaamiyaasha Premier League ayaa ka dhigay 17 guul oo toos ah guushii ay ka gaareen Everton inkasta oo aysan heysanin weerarkoodii ugu xooganaa hadana guulo ayeey gaarayeen kulamadii ugu dambeeyey horyaalka premier league xilli ciyaareedkan. dambeeyay
Kooxda manchester city ayaa xalay guul 3-1 ah ka gaartay dhigooda Everton ciyaar ay goolasha ka qeybsadeen Foden, mahrez iyo Bernabdo Silva taas oo Manchester City ka caawisay in 10 dhibcood oo nadiif ah kasara marto kooxda kusoo xigta ee Man united.
Kevin De Bruyne iyo Sergio Aguero ayaa labaduba qarka u saaran inay badiyaan guulaha rikoorka ah ee City halka Ilkay Gundogan uu isna yahay mid kale oo saameyn xoogan ku leh Safka Guardiola.
Tababaraha reer Catalan ayaa u baahan doona kooxdiisa oo buuxda haddii ay weerarayaan afarta tartan ee ay ku sii nagaadaan, iyo jadwalka ciyaarta oo adag ayaa la micno ah in nooc kasta oo qoto dheer oo Champions League ah uu dammaanad qaadayo jadwalka labada ciyaar ee isbuuc ilaa dhamaadka ee xilli ciyaareedka.
Gundogan waa ciyaaryahan aan caadi aheyn laakiin haddii aad rabto inaad ku guuleysato koobab ama aad halkaas joogto ilaa dhamaadka waxaan u baahanahay kooxda oo dhan ayuu yiri Guardiola ciyaarta kadib Waxa aan mar labaad la yaabanahay waa midnimada ragga aan ciyaarin – Ben Mendy, John Stones, Oleks Zinchenko, Fernandinho, qof walba waa qeyb cajiib ah oo tan ah.
Waxaan leenahay jadwal aad u xun, waxaan heysanaa jadwal cajiib ah. Waxaan heysanaa Wolves iyo Southampton markii aan fileynay isbuucyo dheer Ma lihin usbuuc dheer xilli ciyaareedka oo dhan qof walbana wuu ku lug yeelan doonaa Waxaan u baahanahay qof walba.
Marka la eego shuruudaha Premier League, inkasta oo ay haatan yihiin 10 dhibcood kuwa ku haaya Xitaa markii aan si buuxda loo xoojin, waxay umuuqataa inaysan jirin hab lagu joojiyo.
Previous articleErling Haaland oo Rikoor ka dhigay Tartanka uefa champions league.
Next articleThomas Thuchel oo kooxdiisa ugu baaqay ineey lasoo wareegaan Niklas Sule.